Shiinaha dubista bir dumbbell dhigay bir warshad iyo alaab | Yunlingyu
Koodhka alaabta: YLY - 41 LB
Cabbirka badeecada: 18 * 9 * 7cm
Dhexroor dhexdhexaad ah: 1 inji
Dhererka gacanta: 14 inji
Magaca badeecada dubista bir dumbbell dhigay
wax bir bir ah
Xirxirida Sanduuqa caaga ah
kale Cabbirka badeecada: 18 * 9 * 7cm
Xajmiga Ballaaran: 1 inji
Wadarta miisaanka: 41LB
Miisaanka aasaasiga ah: 5LB
1. Layli dumbbells waqti ka dib, wuxuu wax ka beddeli karaa khadka muruqyada, Wuxuu kordhiyaa adkeysiga murqaha. Samee jimicsi culus culus dumbbell si joogto ah, waxay adkeyn doontaa muruqyadaada, murqaha muruqyada, Waxay kordhisaa muruqyada
1. Waad jimicsi kartaa muruqyada addimada sare iyo dhexda iyo caloosha, haddii aad ku dhejisid labba gacmood labada gacmood qoorta dambe ee qoortaada inta aad fadhiisanaysid, waxay kordhin kartaa culeyska layliyada caloosha, waxay qaban kartaa qoob-ka-ciyaarka oo dhinac u leexin kartaa jimicsi kara murqaha muruqyada gudaha iyo dibaddaba, gacanta dumbbell oo gacanta toosan horay u qaadda iyo wiishka fidsan ee dhinaca ayaa jimicsi kara kara garabka iyo muruqyada laabta.
3. [Naqshad Nabdoon]: Ammaan iyo fududaan aan siibiil ahayn, tayo ceeriin tayo sare leh. Waxaa ka mid ah afar xarig oo lagu duubo si loo hubiyo in taarikada miisaanka si ammaan ah loogu xirayo baararka dumbbell. Aad ayey u fududahay inaad kala bedesho barbell iyo kala duwanaanta dumbbell
4. [Kulan fudud iyo kaydinta]: Fudud in la soo ururiyo oo la kala furfuro teknoolojiyadda maroojinta. Marka la kala jaro waxaa lagu keydin karaa meel ugu yar. Kala daadashada ka dib, way fududahay in la qaado, oo ku habboon goob jimicsi guriga.
Dumbbell hagaajin karo / Barbell Deji
Si fudud loo hagaajin karo Dumbbell / Barbell oo loo dejiyay xulashooyin badan oo culeys ah. Deg deg ah oo fudud in la soo ururiyo oo la qabsado. Ku qalabaysan taargooyin miisaanka si fudud looga saari karo oo culeysyo kala duwan leh. Intaa waxaa sii dheer, waxaa ka mid ah 2 baararka dumbbell iyo fidiyaha baararka si loo abuuro barbell.
Hore: dubbii dubbii
Xiga: Dumbbell Rubber daawaha laba geesoodka ah
Dumbbell hagaajin karo
Ahama steel Dumbbell
Dumbbell Rubber daawaha laba geesoodka ah
DLS caag dumbbells go'an dahaarka leh